Ho fanantenana sy fiadanana tokoa… | NewsMada
Ho fanantenana sy fiadanana tokoa…
Mpamafy fiadanana sy fanantenana. Izay ny Papa Fransoa amin’izao fitsidihana apostolika ataony eto Madagasikara izao. Miara-dalana ho azy amin’izany koa ny fampihavanana, ny fampiombonam-po sy fanahy, ny fampiraisan-kina… Tsy ny mpino katolika ihany na ny kristianina, fa ny Malagasy tsivakivolo.
Tsy vitan’izay, amin’ny maha filoham-panjakana azy: tsy latsa-danja ny lafiny diplaomasia. Mifaningotra amin’izany ny fampandrosoana sy ny toekarena: fampiasam-bola, varotra, famokarana… Hanao ahoana àry ny voa nafafy amin’izany rehetra izany? Mba hisy fitsirihana, faniriana, fitomboana, fiotazana…
Eny, na tsy ho eo no ho eo aza ny hoe vokatra: mba azo antoka ahay fa misy ny faharesen-dahatra anaty, ny hetsika sy ny fiovana, ny firosoana amin’ny dingana hafahafa kokoa… Tsy mandalo fotsiny ny fandalovan’ny Papa, na mandalo tokoa aza ny filaza azy. Izy mandalo fa inona no mitoetra na navelan’ny fandalovany?
Eo, ohatra, ny fotodrafitrasa, ny lalana, ny fahadiovana, ny filaminana… Mandra-pahoviana? Tsy tokony havela handalo fotsiny mbamin’ny fiaraha-mientana sy fihavanana, indrindra ny hoe fiadanana sy fanantenana. Tsy latsa-danja amin’izany ny lafiny fampandrosoana, toekarena, famokarana…
“Tsy hoe tsy fisian’ny ady ny fiadanana, fa hatsaram-pitondran-tena, toe-tsaina, finiavana ho amin’ny halemem-panahy, fahatokisana, fahamarinana”, hoy ny filozofa iray izay, i Spinoza.
“Tsy misy ny lalana mankany amin’ny fiadanana, fa ny lalana no fiadanana”, hoy ny filohan’i Inda teo aloha, i Gandhi.
Ary ny fanantenana? “Tsy afa-manome fanantenana ny hafa afa-tsy izay ananany ny olona”, hoy ny filozofa Alain. “Mila manaiky ny fahadisoam-panantenana mandalo ny olona, nefa mitahiry ny fanantenana mandrakizay”, hoy ny pasitera Martin Luther King. Fisaintsainana na tombanana ho fihevitr’izao tontolo izao aza?
Ny fanantenana mampiaina, fa ny finiavana no mampandroso; ny fiadanana tsy tanjona tratrarina fa fiainana marina.